महिला मन्त्रीको आश्वासन देखाएर थाङ्नामा सुताइएकोमा सांसद यशोदाको दुःखेसो…. – YesKathmandu.com
यशोदा लामा,अध्यक्ष दलित जनजाती पार्टी नेपाल
पार्टी चलाउन न सजिलो कहाँबाट हुन्छ ? डराएर बस्नुभन्दा पार्टी टुक्राएर संगठन चलाउनु नै उचित ठाने । र, विशेन्द्र पासवानसँग पार्टी विभाजन पनि गरेँ । उसको अन्याय र अत्याचार सहेर बस्न नसेकेर मैले छुट्टै पार्टी खोलेको हुँ ।
मलाई नसोधिकन संसदको कोषको रकम जम्मै उसको जिल्लामा बाँडफाँड गर्यो । ल ठीक छ, कोेषको रकम जहाँ हालेपनि सर सल्लाह त हुनपर्यो नि । छैन । त्यति मात्र होइन । सांसद बनाएबापत उसलाई मैले तीन करोड दिनुपर्ने रे । पार्टीमा राखे कारबाही गर्ने रे । मेरो पालो ल कारबाही गर भन्दै पार्टीबाट बाहिरिए ।
२००७ सालदेखि १० बर्र्षे सशस्त्र जनयुद्ध हुँदै ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपश्चात् जनताले के पाए ? साँच्चै भन्ने हो भने ,के परिवर्तन भयो ? संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ भनिएको छ देश यसले के पायो ?अहिले पनि देशले केही पाएको छैन । यसले जनतालाई भ्रम छरिरहेको छ । मैले पाशवानकाविरुद्ध मात्रै होइन कांग्रेस होस् या एमाले तिनको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ । यसका साथसाथै १० बर्षे जनयुद्ध गरेर आउँने माओवादीले पनि केही परिवर्तन गरेनन् । यिनीहरुको विरुद्धमा पनि लड्नुछ । माओवादीका निम्ति आदिवासी जनजातिहरुको रगतको खोला बगाए, बलिदानी दिए तर अधिकार के पाए ? त्यसकारणले गर्दा यी दलहरुलाई चुनौती दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ । यहिँ अनुरुप म अघि बढेको छु ।
परिवर्तनको नाममा प्रचण्डले जुन खालको दश बर्षे सशस्त्र जनयुद्ध गरेर सर्वहारा नेता बन्नु भएको थियो । यसमा आदिवासी जनजातिको अदिद्वितिय भूमिका छ । खै, तिनीहरुले के पाए ? गणतन्त्रमा मुलुक गएर के उपलब्धी भयो ? अहिलेपनि संघीयतालाई ओझेल पार्न शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरु गोलमेलमा लागिरहेका छन् । अहिले जो सत्ता ओगटेर बसेका शासनधारीहरुको अनुकुल संविधान ल्याइएको छ । हिजो यहिँ सत्तामा पुग्न कोइराला परिवारले भ¥याङ लगाइदियो ।
६० बर्ष शासन पनि चलाए । अब अहिले अर्काे कोइराला उत्पन्न भएको छ । पालैपालो एउटै जातले हालीमुहाली गर्ने जुन प्रवृत्ति अड्किएको छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । यसका निम्ति दलित जनजाति पार्टी नेपाल जन्मिएको हो । कोइराला प्रवृत्ति र प्रचण्ड प्रवृत्तिमा कुनै फरक देख्दिन । जनयुद्धमा दलित,जनजाति र मधेसीहरुको रगतको खोला बग्यो तर अन्तिममा एउटै जातिको हालीमुहाली भयो । त्यसैले व्यक्ति परिवर्तन भएर मात्र शासन परिवर्तन नहुँदो रहेछ ।
पाँच वटा साना दलका लागि चारवटा मन्त्रालय छुट्टयाइएको नारा पनि थियो । तर, कतिजना साना दलहरु समावेश भए ? चारवटा साना दलको प्रतिनिधिमा दुइ जनाको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने भनिएको पनि थियो । दुईवटा मन्त्रालय दिनुपर्छ हामी मिलेर आउँछौ भनेका थियौै । यसमा साथीहरुले समर्थन फिर्ता लिन आँटिरहेका थिए । मैले समर्थन फिर्ता लिने औचित्य नदेखेर एउटा मोर्चा जस्तै बनेका थियौ । कुरा यहिँनेर छ । दौडधुप पहुँचवालाहरुले मात्रै गर्छन् । तिनकै कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुुन्दा रहेछन ।
सांसद लामासँग एसकाठमाडौं प्रतिनीधिले गरेको कुराकानीमा आधारित
सत्तापक्षका नेताले मलाई बाह्य शक्ति लगाईदिने धम्कि दिए–ओली
लैनचौंरमा खाना खाँएपछि राजेन्द्र महतोले भने–‘संशोधन विधेयकमा अझै केही थप्नुपर्छ’